सुदर्शनको इन्गेजमेन्ट छोडेर सुटिङमा पूजा ! - Nagarik Today
अशोज ६ २०७८, बुधबार
होम » सुदर्शनको इन्गेजमेन्ट छोडेर सुटिङमा पूजा !
सुदर्शनको इन्गेजमेन्ट छोडेर सुटिङमा पूजा !
by नागरिक टुडे भदौ २२, २०७८
निर्देशक सुदर्शन थापा र अभिनेत्री पूजा शर्मा बीच मित्रता घनिष्ठ छ । थुप्रै प्रोजेक्टमा उनीहरूको सहकार्यले समेत त्यो देखाउँछ । सुदर्शनले निर्देशक गरेको प्रायः फिल्ममा पूजा दोहोरिने मात्र होइन, दुवैले मिलेर फिल्मसमेत निर्माण गरिसकेका छन् ।
धेरै प्रोजेक्टमा सहकार्य गरेका दुवैको प्रेम सम्बन्धको हल्लासमेत नचलेको होइन । तर दुवैले मिल्ने साथी बताउँदै आएका छन् । केही पहिले त दुवैले एउटै गाडी पालोपालो चढ्ने गरेका थिए । पूजाको नाम अभिनेता आकाश श्रेष्ठसँग जोडिएर आउँदा दुवैबीच मनमुटाबको खबर पनि बाहिर आएको थियो
सोमबार सुदर्शन थापाको मोडल तथा समाचार वाचिका सुप्रिया कटवालसँगको इन्गेजमेन्ट समारोहमा पूजाको अनुपस्थित रहिन् । काठमाडौँको –याडिसन होटलमा आयोजना भएको इन्गेजमेन्ट समारोहमा अभिनेता राज कटुवाल, वर्षा सिवाकोटीको समेत उपस्थिति रहँदा सुदर्शनको सबैभन्दा नजिकको साथी भनिएकी पूजाको उपस्थिति नहुनुलाई फिल्म क्षेत्रमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कतिपयले त सुदर्शनको इन्गेजमेन्ट हेर्न नसक्ने भएर पूजा समारोहमा उपस्थित नभएको समेत चर्चा गरे । सुदर्शनको इन्गेजमेन्ट कहाँ गएकी थिइन् त पूजा ? धेरैको मनको प्रश्न हो यो । पूजाले भने एक मिडियासँग कुरा गर्दै सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलको एक गीतको सुटिङमा व्यस्त भएको बताइन् ।
actress poojapooja sharmasudarsan thapaSudarshan engagementsupriya katuwal
अक्षय कुमारको ‘बेल बटम’ ले कमायो ५० करोड
सोनू सूदले २० करोड कर छली गरेको आरोप
कलाकार रमेश केसीको अन्त्येष्टि
सलमान खानलाई बिग बोस–१५ का लागि ३५० करोड भारु दिइने
माल्दिभ्समा खुलेकी अदिती
विष्णु माझीको ‘चरी जेलैमा’ को युट्युबमा नयाँ कीर्तिमान
विष्णु माझीबारे प्रहरीको सोधपुछ
यी हुन् आज शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि आएका कम्पनी
चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि